Malunga nathi · Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
I-Oyoun idala indawo yengxoxo ebaluleke kakhulu, ulingo olubonakalisayo kunye nobumbano olukhulu. Enkosi kwiminikelo eyahlukeneyo yenkcubeko, iOyoun liziko lenkcubeko kunye nemveliso yolwazi. Iziko lezenkcubeko elingenzi nzuzo lizibona njengeqonga eliphakathi nelichasene noluleko kwiindlela ezisandula ukuvela phakathi kunye nakwimimandla yobugcisa obuhle, ubugcisa bokusebenza, iqonga lezemidlalo, uncwadi, umdaniso, umculo, iindaba ezintsha, ezentlalo, imfundo nokunye okuninzi. .
Ekuqaleni kuka-2020, i-Kultur NeuDenken UG engenzi nzuzo yathatha indawo ye-3500 m² yeziko lenkcubeko eLucy-Lameck-Str 32, eBerlin Neukölln.
I-Oyoun iqhuba iiprojekthi zentlalo nezobuchwephesha kunye nezobugcisa eziqaqambisa umbono we-neurodiverse kunye nodidi olubalulekileyo kwiBerlin nakwilizwe jikelele, ngenjongo yokudala iqonga lokudibana elingcono lokuqonda, ukufuduka kunye nobugcisa kunye nenkcubeko yehlabathi, indawo yengxoxo yobugcisa malunga nengingqi, ukukhuthaza izihloko ezifanelekileyo elizweni nakwamanye amazwe.
Kwi-Oyoun, indlela enqamlezileyo ngumgaqo obalulekileyo okhokelayo kunye nendlela yokuphila enokufunyanwa kwinkqubo yobugcisa nenkcubeko. Kule nkqubo, iinyani ezahlukeneyo zobomi kunye neendlela zabo zobugcisa kunye nenkcubeko yokuthetha ziyenziwa zibonakale kwaye zixhotyiswe.
Isichazi-magama sethu esincinci:
Apha sichaza ukukhula kwethu okuqhubekayo kokuqonda iikhonsepthi ezingundoqo kunye neenqobo ezisemgangathweni ezihamba kunye nomsebenzi wethu wobugcisa-wenkcubeko kunye nowentlalo nenkcubeko kunye nendlela yokucinga ukusuka emhlabeni ukuya phezulu.
UQueer * ubufazi
Nangona eli gama ngokucacileyo libandakanya abantu abangafuniyo, lihamba ngaphaya kokuchazwa kwabantu abancinci ngokubhekisele kubuni besini kunye nokuzibandakanya ngokwesini. I-feminism, egxile ekulinganeni phakathi kwamadoda nabasetyhini, ayibandakanyi isazisi esingaphaya kwesibambiso esiqhelekileyo, abantu abadlulayo kwaye abazikhathaleli iingxaki ezinzulu zobuhlanga, ezibandakanya ubuhlanga, ubuhlanga kunye nenkcubeko yobundlobongela.
Eli xesha libonelela ngenkqubo-sikhokelo ethathela ingqalelo isimilo senkqubo apho ezopolitiko zengcinezelo zichaphazela ubomi babantu ababekade bengamathanga kunye nobuhlanga. Ubiza ukuba kuhlolwe amabali acinezelayo asekwe kwizenzo zekoloniyali kwaye abeke amazwi namabali aba bantu bacinezelweyo ngaphambili kolu phononongo.
Umbono wokufudukela eJamani uyaqaphela kwaye ubhiyozele izakhono, amandla kunye nokuzithemba kwamalungu oluntu olufudukayo, kubandakanya abafuna indawo yokuhlala kunye nabantu abanemvelaphi yeembacu. Sisebenza ukunyusa amazwi abantu abafudukayo kunye nokuqinisekisa nokunyusa ukumelwa kwabo kubugcisa, kwinkcubeko nakubomi boluntu.
Lazi iqela lethu. Sijonge phambili kumyalezo wakho!
U-Louna wagoba u-Abdelmoula Sbou
I-Louna (beg) izikhokelo, uyilo, ucebise. Xa uLouna engekho eOyoun, uyathanda ukumamela iipodcast.
Uphando lukaMadhumita, uyabona, amaphupha. Xa uMadhumita engekho eOyoun, ke ulahlekelwa ngumdaniso kumhlaba wethu othandekayo.
UNina ucebisa, uthungelwano, ulwakhiwo. Xa uNina engekho eOyoun, ukhwela ibhayisekile yakhe kwaye upheka nabantwana.
UDami uyamamela, amaphupha kunye nezicwangciso. Xa uDami engekho e-Oyoun, uyakonwabela ukutsiba-tsiba, ukufunda iincwadi zeendaba kunye nokuhambahamba.
Izicwangciso zika-Anette, uququzelelo kunye neenethiwekhi. Xa uAnette engekho eOyoun, ujikeleza amachibi amaninzi.
UNasi ubala, afunde, acwangcise. Xa uNasi engekho eOyoun, ufumanisa indalo.
Izicwangciso zikaMario, uququzelelo, kunye neencwadi. Xa uMario engekho eOyoun, udlala amagubu.
Izikhokelo zikaAndreas, ukugcina kunye nolawulo. Xa uAndreas engekho eOyoun, uyathanda ukwenza imisebenzi yezandla ekhaya.
UArjun ubhala, iifilimu, usike. Xa iArjun ingekho kwiOyoun, ithatha uhambo olude kwaye ityale imbewu.
U-Sophia fundraist, ulawulwa. Xa uSophia engekho eOyoun, uthanda ukufunda iincwadi ezigxekayo ekuhlaleni, athethe ngazo kwaye akhwele ibhayisekile yakhe ngeBerlin.
UKhadija ujonga amagcisa kunye nemisitho kwaye uvelisa isandi estudiyo. Xa u-Khadija engekho kwi-Oyoun, wenza umculo, avelise iikhonsepthi zoyilo kwaye ahambehamba.
UTina uququzelela kwaye uqhagamshele. Xa uTina engekho kwi-Oyoun, ukhetha ukuya kwindalo.
UPaul uphanda, abhale aze abale. Xa uPawulos engekho e-Oyoun, ufunda iinoveli.
U-Hatice uyasebenza kwimidiya yoluntu, iiposti zezinto kwaye wonwabile ngeziganeko ezintsha. Xa uHatice engekho eOyoun, usela ikofu, afunde iincwadi kunye namaphupha ngelixa ebukele iifilimu ze-Bollywood.
UAlejandro uyalungisa, uyakha, unentambo. Xa uAlejandro engekho eOyoun, wenza ubucwebe besilivere.
UGerd uyasebenza, uyalungisa, uyalinda. Xa uGerd engekho eOyoun, ungcakaza nonyana wakhe.
Xa ndise-Oyoun, ndiyavuya ukunceda kunye nokuxhasa apho (kwaye kubani) ndinokuthi ndibhale kwaye ndilinde ii-imeyile, ndibuze imibuzo kwaye ndifune (ukufumana) iimpendulo.
Xa ndingekho e-Oyoun ndikwijimu okanye ndiceba ukuhamba nosapho, abahlobo kunye nam, Mna kunye nam, sithatha iifoto kunye nokutya kwam, sicwangcisa uhambo / uhambo.
Xa ndise-Oyoun, ndibhala amanqaku eendaba, ndikhuthaza iminyhadala kwaye ndicwangcise amaphulo exesha elizayo. Xa ndingekho e-Oyoun ndiyapheka, ndifunda iilwimi kunye nokubukela iintaka.
Xa ndise-Oyoun, ndincedisa ukuyila iwebhusayithi kunye namajelo eendaba ezentlalo.
Xa ndingekho e-Oyoun, ndithanda ukudlala intenetya yetafile nabahlobo, ndithanda ukuzoba nokupeyinta kwaye ndiyakuthanda ukuya kwi-cinema nakwithiyetha.
Xa ndise-Oyoun, ndihleka kakhulu kwaye ndifunde izinto ezintsha.
Xa ndingekho e-Oyoun, ndikunye nosapho lwam, ndibukele ibhola ekhatywayo kwaye ndihoye neqela lam lebhola ekhatywayo eHamburg.
Xa ndiseOyoun ndilungisa izinto zasendlini nalapha ekhaya ndilungise nemicimbi.
Xa ndingekho e-Oyoun, ndibukele izibane zedolophu, ndikhwele ikiti, okanye ndikhwele ibhayisekile ukujikeleza idolophu.
Xa ndise-Oyoun ndibeka iqonga kunye nezixhobo kwaye ndilungise nantoni na eyonakeleyo. Ndikwagcina inethiwekhi.
Xa ndingekho eOyoun, ndiyapheka, ndidlale ichess okanye ndikhwele isithuthuthu sam.
Unokufumana iintengiso zomsebenzi apha. Kwizicelo zokuthelekelela, sibhalele i-imeyile imisebenzi@oyoun.de. Siyavuya.
Yonke imizobo yeqela ngamagcisa amangalisayo UAlexis Jang kwaye Elena Beretta.
Umntu ohlala naye
UZeo ngumbhali wengoma, umrepha kunye nomenzi wefilimu. Ngomsebenzi wakhe ubhala ukwaphulwa kwamalungelo oluntu akubonayo kwilizwe lakhe-ngokubhala, ukucula okanye ukwenza ividiyo.
UBernard Hage, owaziwa njenge "Art of Boo", ngumzobi waseLebhanon, imvumi kunye nomzobi wezopolitiko ozinze eBerlin.
UFernande Njonkou Njanjo
UFernande Njonkou Njanjo ngumakhi wezakhiwo kunye nomfaki-zithombe ngoqeqesho olwakhula phakathi kweCameroon, iFransi kunye neNetherlands kwaye ngoku isekelwe eParis.
Umbalisi, umbhali wesikrini, umlawuli kunye nomenzi wefilimu ovela eSyria. U-Ammar wafunda iZifundo zaseJapan eDamasko kwaye uhlala kwaye wasebenza eBerlin ukusukela ngonyaka we-2017, ngoku kutsha nje malunga neprojekthi yokuthandana kwama-Arab-Japan.
I-Syrine ngumyili wezakhiwo kunye nomphathi weprojekthi. Umsebenzi wakhe ugxile ekudlaleni ubugcisa bale mihla, ungenelelo lwentlalo yenkcubeko, kunye neempembelelo zentlalo noqoqosho.
UNestor Siré ligcisa elizimeleyo elineengcambu zaseCuba, egxile kubugcisa bedijithali.
UKUMANYANISWA KWAMANYE AMALUNGELO!
Imalunga nomntu wonke. Ubugcisa buhlala bukhululekile!
Namhlanje siyabuqonda ubugcisa kunye namaziko ayo, iimyuziyam, iithiyetha, izitudiyo, iiklabhu kunye neendawo zasezidolophini njengeendawo ezivulekileyo zezabantu abaninzi.
Funda ngakumbi malunga NABANINZI
Ngaba ungathanda ukusazi, usithumelele isicelo sakho esingasicelanga, ucebise ngeprojekthi okanye omnye umbono? Emva koko usibhalele umyalezo ongezantsi, sijonge phambili ukuva kuwe! Ngaba ungathanda ukusebenzisa indawo yethu? Emva koko nceda uthumele i-imeyile ku-space@oyoun.de
Ngubani u-9 + 1 =?
Ndiyakuqinisekisa oko yemfihlo.